Vikela ukuphequlula kwakho i-inthanethi ngaso sonke isikhathi nge-NordVPN | Izindaba zamagajethi
Vikela ukuphequlula kwakho i-inthanethi ngaso sonke isikhathi nge-NordVPN
U-Ignacio Sala | | Aplicaciones
Ubuchwepheshe buhamba phambili kakhulu futhi asikwazi ukubona kuphela ukuthi amadivayisi kagesi aguquke kanjani, kepha futhi nezinhlelo zokusebenza nezinhlelo zokusebenza. Ngeshwa, kuya ngokuya kujwayelekile ukuthola ezinye izindaba ezihlobene nezintsha Ukukhwabanisa kweTelematics, ama-hacks ezinsizakalweni zewebhu anemininingwane eyebiwe… Futhi ngaphezu kwamahlazo wobumfihlo ahlukene, ngeshwa, esiwajwayele.
Ngaphandle kwamathuluzi ahlukene abakhiqizi be-software abakhulu abanawo ukuze sigweme ukuqondiswa ngabangane babanye, asisoze saphepha ngokuphelele kulaba bantu, ngaphandle kokuthi thina Ngisebenzisa izinsizakalo ze-VPN. Kodwa Yini i-VPN?
1 Yini i-VPN
2 Kungani i-VPN idingeka
3 Ngabe i-VPN isinikeza ini
3.1 Ukulandwa okungaziwa kusuka ku-inthanethi
3.2 Ukuphepha kwenkampani
3.3 Gwema imikhawulo yendawo
4 I-NordVPN, inani elingcono lemali le-VPN
Lapho senza ukubonisana ku-inthanethi, silanda i-imeyili kudivayisi yethu, sisebenzisa uhlelo lokuthumela imiyalezo ... yonke leyo datha kubonakala kumaseva womhlinzeki wethu. Endabeni yezinhlelo zokusebenza zemiyalezo, imilayezo ibethelwe ukuphela kokugcina, bazi kuphela ukuthi sithumele noma sithole umyalezo, akukaze kube okuqukethwe. Kuyafana nezinsizakalo ezinkulu zeposi.
Kepha uma sibheka i-inthanethi, akekho ongasivikela uma singasebenzisi isevisi ye-VPN. Ngaphandle kwensizakalo ye-VPN, yonke imininingwane yethu yesiphequluli ihlala igcinwe ku-rsgistro ehlotshaniswa ne-IP yethu, ukuze noma iyiphi inhlangano kahulumeni egunyazwe ngaphambi kwezomthetho (kuya ngezwe) ikwazi ukufinyelela kumlando wethu wokuphequlula.
Izinsizakalo ze-VPN dala umhubhe obhalwe ngokuphelele phakathi kweqembu lethu namaseva, ukuze amaseva e-VPN kuphela azi ngaso sonke isikhathi ukuthi yimaphi amakhasi e-web esiwavakashelayo noma ukuthi yiziphi izinsizakalo esizisebenzisayo. Izinsizakalo ezikhokhelwayo ze-VPN azigcini idatha yethu ukuyomaketha nazo kamuva, ngakho-ke irekhodi lomsebenzi wethu ku-inthanethi alenziwanga.
Kungani i-VPN idingeka
Ngaphandle kokuthi amazinga wedatha yeselula asinikeza i-GB engaphezulu nangaphezulu, abasebenzisi abaningi ayikwazi ukumelana noxhumano lwamahhala lwe-Wi-Fi. Izikhungo zokuthenga, imigoqo, amathilomu, izikhumulo zezindiza ... ngezinye zezindawo zomphakathi ezinikezela ngoxhumano lwe-inthanethi mahhala.
Lolu hlobo lokuxhuma, ezimweni eziningi olungenayo indlela yokuphepha, zigxila kubangani babanye. Uma singasebenzisi ukuxhumeka kwe-VPN, wonke umgwaqo esiwukhiqizayo nesiwuthola kusuka ku-inthanethi kudivayisi yethu kungenzeka ukuthi ubanjwe yilezi. abangane.
Ukuxhumeka kwe-VPN kusungula umhubhe ophephile futhi obethelwe phakathi kwedivayisi yethu ne- imininingwane esiyitholayo kanye / noma esiyithumela kusuka ku-inthanethiNgakho-ke, sizokwazi ukufinyelela kumanethiwekhi wethu wokuxhumana nomphakathi, kuma-akhawunti we-imeyili noma senze ukuthenga ngekhadi lethu lesikweletu ngaphandle kokuthi noma ngubani akwazi ukuyithola leyo datha.
Ngabe i-VPN isinikeza ini
Ukulandwa okungaziwa kusuka ku-inthanethi
Ukuzama ukumisa ubugebengu, amanye amazwe avimbele ukulandwa kokuqukethwe kwe-P2P, ephoqa ama-ISP ukuthi azise abaphathi be-copyright nezinhlangano lapho i-IP ixhunywe kulawo manethiwekhi. ukulanda okuqukethwe.
Ngokuxhumeka kwe-VPN, umhlinzeki wethu we-inthanethi ngeke akwazi ukufinyelela kulolo lwazi, ngakho-ke sizokwazi landa noma yiluphi uhlobo lokuqukethwe ngaphandle kokwesaba ezinhlanganweni zamalungelo obunikazi noma emaphoyiseni angqongqoza emnyango wethu.
Imininingwane egcinwe amaseva enkampani, ezikhathini ezimbalwa kakhulu ayatholakala ngaphandle kwezikhungo zakho ukuvikela ama-hacks kanye / noma ukufinyelela okungagunyaziwe. Ezinyangeni ezedlule, sibonile ukuthi ukusebenza ngocingo sekuqale kanjani ukuba yizinketho izinkampani ezizicabangela njengezinto ezizocatshangelwa.
Ngenxa yezinsizakalo ze-VPN, yonke idatha ethunyelwe neyamukelwa kusuka kwimishini yethu, zibethelwe ukuphela-kuya-ekupheleni, ngakho-ke akekho noyedwa ongakwazi ukuzivimba ozokwazi ukuzisusa ngokubethela kalula futhi ngokushesha (inqubo engathatha iminyaka eminingana).
Gwema imikhawulo yendawo
Impela ezikhathini ezingaphezu kwesisodwa uhlangane nevidiyo ye-YouTube ongeke uyidlale ngoba ayitholakali ezweni lakini. Uma ngabe ubufuna ukuqasha insizakalo yevidiyo yokusakaza engatholakali ezweni lakho noma ubufuna ukufinyelela kukhathalogi etholakala kwamanye amazwe, uzomangala ukubona ukuthi yi ikhathalogi efanayo obukade uyifinyelela.
Izinsizakalo zokusakaza ividiyo ngokuvamile zisebenzisa i-IP ukwenza usithole ngokwendawo futhi ubonise okuqukethwe ngokuya ngezwe. Ngensizakalo ye-VPN, singasebenzisa i-IP yezwe lapho okuqukethwe esifuna ukukufinyelela kutholakala khona futhi sikwazi ukukujabulela futhi sikwazi ukufinyelela kukhathalogi esiyifunayo.
Ingabe uyaqiniseka ukuthi udinga i-PVN? Kulungile chofoza lapha bese wenza isivumelwano seNordVPN ngentengo engcono
I-NordVPN, inani elingcono lemali le-VPN
Izinsizakalo ze-VPN zidinga uchungechunge lwamaseva asatshalaliswa emazweni ahlukene ukuze kwandiswe ukunikezwa kokuxhuma kubo bonke abasebenzisi bayo. INordVPN yenza sitholakale kithi ngaphezu kwamaseva we-50.000 asatshalaliswe emhlabeni wonke. Uma sifuna ukuvikeleka ekuxhumekeni kwakho kanye nokungaziwa, asikwazi ukwethemba ukuxhumana kwethu kunoma iyiphi inkampani ethi inikela lolu hlobo lwenkonzo mahhala ngokuphelele.
Uma sisesha i-Google VPN mahhala, inani lemiphumela cishe alipheli. Kepha kunenkinga, inkinga lezi zinsizakalo ezingakaze ziyibike, futhi lokho kungukuthi tYonke idatha yethu yokuphequlula igcina ithengiswa.
Inkontileka yeNordVPN ngentengo engcono ngokuchofoza lapha
Ziningi izinkampani zokuhlaziya nezokukhangisa ezinentshisekelo yokwazi imikhuba yokusetshenziswa nokusetshenziswa kwabasebenzisi futhi lolu hlobo lwezinsizakalo zamahhala ngumthombo obalulekile. Uma sifuna ukuxhumana kwethu kuvikelekile, ngama-euro angu-3,11 kuphela ngenyanga singakwenza ngeNordVPN.
INordVPN inentengo yanyanga zonke yama-euro ayi-10,64. Uma sikhetha ukwenza isivumelwano ngohlelo lweminyaka emi-2, le ntengo yehliselwa kuma-euro angu-3,11 ngenyanga, engeza ingqikithi yama-euro angama-74,55. Ama-euro angu-3,11 ngenyanga angama-coffe amabili, ngokushintshana esizokwazi ukukwenza phequlula ngendlela ephephe ngokuphelele kuwo wonke amadivayisi wethu ngokuxhumeka kwe-inthanethi, kusuka kuma-Smartphones kuya kumathebulethi ngamakhompyutha, amathelevishini ahlakaniphile ...
I-NordVPN iyatholakala yeWindows, MacOS, Linux, Android, iOS, Android TV, Chrome neFirefox, esivumela ukuthi sisebenzise amadivayisi ngamunye ekhaya lethu ngaphandle kwemingcele.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Aplicaciones » Vikela ukuphequlula kwakho i-inthanethi ngaso sonke isikhathi nge-NordVPN
UJuan P. kusho
Njengoba i-athikili isho, ngiyavuma ukuthi i-NordVPN ingumkhiqizo omuhle wenani lemali. Imvamisa ngiyisebenzisa ukubona ibhodi lezikhangiso le-HBO e-United States, kepha kwesinye isikhathi ngithola izinto ezithakazelisayo emazweni ebengingalindele. Ngithole nokuthi ngiyazibona izitayela ze-YouTube zendawo ngayinye futhi ngalokho ngizama ukuthuthukisa iziteshi zami.
Phendula uJuan P.
Izinhlobo ze-USB: wonke amathuba nezici
ISonos Arc, lapho ubuhle buza ngendlela yebha yomsindo